Léonard de Vinci - Wikipedia
Momba ny olona
Anarana: Léonard de Vinci
Teraka: 15 Aprily 1452
Maty: 2 Mey 1519
Toeram-piaviana sy ny andraikitra
Asa : * mpahay siansa
Momba fiainana manokana
Léonard de Vinci (15 Aprily 1452 - 2 Mey 1519) dia lehilahy italianina iray izay niaina tamin'ny andron'ny Renaissance. Izy dia mpahay siansa, mpahay matematika, injeniera, mpamoron-javatra, mpahay rafi-batana, sokitra, mpanao mari-trano, bôtanista, mpahay mozika sy ny mpanoratra. Liana tamin'ny zava-drehetra misy eo amin'ny natiora i Léonard de Vinci no sady liana tamin'ny fomba fiasan'ny zava-drehetra. Nahay nianatra, namorona sy nanao zava-mahaliana maro isan-karazany ihany koa izy.
Maro ny olona mihevitra fa Léonard de Vinci dia iray amin'ireo mpanao sary hosodoko lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra. Ny olona hafa mihevitra fa izy no olona manan-talenta indrindra hatramin'izay mba efa niaina. Ny mpahay tantaran-javakanto Helen Gardner dia nilaza fa tsy nisy olona toa saika tahaka azy satria liana amin'ny zavatra maro izay toa nanana ny saina ny iray goavam-be, nefa ny zavatra toy tahaka ny olona dia mbola zava-miafina.
Léonard dia teraka teraka tao Vinci izay tanàna kely akaikin'i Florence, Italia. Izy nampiofanina mba ho mpanakanto ny mpanao sokitra sy ny mpanao hosodoko Verrocchio. Nandany ny ankamaroan 'ny ainy miasa ho an'ny manan-karena Italiana ambony. Tamin'ny taona farany, dia nipetraka tao an-trano tsara tarehy nomena azy avy amin'ny Mpanjakan'i Frantsa.
Léonard de Vinci afaka manao isan-karazany ny kinga saina zavatra, fa Izy malaza indrindra ho toy ny mpanao hosodoko. Roa lahy tamin'ny sary no eo amin'ny sary hoso-doko malaza indrindra eo amin'izao tontolo izao: ny Mona Lisa sy ny Fiaraha-misakafo Farany. Nanao sary maro. Ny malaza indrindra sary dia Olon'i Vitruvia. Léonard dia nieritreritra foana ny vaovao mazava. Ny ankamaroan'ny ny famoronana dia tsy natao. Na izany aza, dia fantatsika ny heviny, satria izy nitandrina ny kahie. Nanoratra toy izao izy ka mby teo tao aminy matetika. Ny sasany amin'ireo hevitra izay nihevitra ny dia ny angidimby, ny fiara dia ny fanaovana kajy, ny elon'aina, ny milina, ny telefaonina, ny evolisiona, ary ny herin'ny masoandro.
1.2 Fiainana tao amin'ny trano fiasan'i Verocchio
1.3 Taona niasana tamin'ny 1476-1499
1.3.1 Gran Cavallo
1.3.2 Sakafo hariva farany
1.3.3 Virjinin'ny Vato
1.4 Taona niasana 1499-1513
1.4.1 Virjiny sy ny Ankizy miaraka amin'i Masimbavy Anne ary Masindahy Jaona Mpanao Batisa
1.4.2 Adin'i Angiari
1.4.3 Mona Lisa
1.5 Taona niasana 1506-1516
1.6 Fahanterana ary fahafatesana (1516-1519)
2 Sary, bokin-tsary
3 Fanadihadiana ny momba an'i Léonard
3.1 Diary ary sora-tanana
3.2 Fanadihadiana siantifika
4.1 Rohy ivelany
Fiainana[hanova | hanova ny fango]
Fahazazana[hanova | hanova ny fango]
I Léonard dia teraka tamin'ny 15 Aprily 1452, tany amin'ny tanànan'i Vinci, tao an-dohasaha ny renirano Arno. Ny raibeny, Antonio Meza, nanoratra teo amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny teraka. tsy manambady ny ray aman-drenin'i Léonard . Ny rainy mpahay lalàna, Messer Piero Fruosino von Antônio da Vinci.  ny reniny, Caterina, dia mpanompo. Mety ho andevo avy any Afovoany Atsinanana izy io. Ary rehefa 3 taona i de Vinci dia nisaraka ny reniny ny rainy. Taty aoriana dia naka am-ponja an'i Léonard sy ny reniny indray ny rainy izay nanambady ary nanana ankizy maro kokoa. Ny anarana fenon'i Léonard dia "Léonard von ser Piero da Vinci", izay midika hoe "Léonard, zanak'i Messer (Tompokolahy) Piero avy any Vinci ".
Léonard dia nandany ny dimy taona voalohany tao amin'ny toeram-pambolena izay tranon'izy sy ny reniny. Avy eo dia nonina tany Vinci ny rainy, ny vadin-drainy Albiera, ny dadabe ary ny dadatoany, Francesco. Ary rehefa nihalehibe Léonard, dia izy ihany no nanoratra zavatra roa momba ny fahazazany. Tsaroany fa rehefa nandry ivelany ny fandrian-jaza nisy vorona lehibe nanidina avy eny amin'ny lanitra, ary Nihevaheva teo amboniny. Ny rambony volo nisosa ny tavany.  Léonard ny fahatsiarovana lehibe hafa dia ny fomba nahita lava-bato raha mamantatra eny an-tendrombohitra. Dia raiki-tahotra izy fa misy biby lehibe mety ho niafina tao. Fa izy koa dia tena faly sy liana mba hahitana izay ao anatiny. 
Tamin'izy mbola zaza no nanombohany ny sary hosodoko. Nanoratra momba ny fiainan'i Léonard i Giorgio Vasari, fotoana fohy taorian'ny nahafatesany. nitondra ny zanany ny sary hoso-doko ho any Florence i Messer Piero, ary nivarotra azy amin'ny iray mpivarotra zavakanto. 
Fiainana tao amin'ny trano fiasan'i Verocchio[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 1466, fony i Léonard efatra ambin'ny folo taona, nitondra azy ho any Florence ny rainy, mba hiofana ao amin'ny mpanakanto Verrocchio.
Florence dia toerana tena nampientam-po ho an'ny tanora izay te ho mpanakanto. Maro ireo mpanakanto malaza nipetraka tany Florence, manomboka amin'ny Cimabue sy Giotto ao amin'ny taonjato faha-13. Na aiza na aiza ny nojeren'ny olona dia nisy zavakanto malaza sy tsara tarehy. Ny katedraly lehibe nanana tavo vaovao goavana. Ny Fiangonan'i Masindahy Jaona dia varavarana izay nanjelanjelatra volamena ary nolazaina fa anisan'ny varavarana tsara tarehy indrindra eto an-tany. Nisy fiangonana iray hafa nisy sarivongana nanodidina azy ny mpanao sary sokitra malaza indrindra, anisan'izany ny iray avy amin'i Verrocchio mpampianatr'i Leonard.
Raha tsara vintana ny mpanakanto, dia hahita ny mpanan-karena mpiaro azy hividy ny sary hoso-doko maro avy aminy ilay mpanakanto. Ny fianakaviana Medici no nanan-karena indrindra tao Florence. Izy ireo dia efa nanao ny lapa tsara indrindra tao Florence, ary tia nividy sary hoso-doko, sarivongana sy zavatra hafa tsara tarehy. Izy ireo ihany koa dia liana amin'ny fianarana ny boky aman-gazety sy ny filozofia. Maro ny tanora mpanakanto manantena ny hahazo asa avy amin'ny Medici sy ny namany.
Nanana atrikasa lehibe izay iray amin'ireo be mpandeha indrindra tao Florence i Verrocchio. Léonard dia nianatra ny ho mpanakanto, ka tsy maintsy nianatra sary, sary hoso-doko, sculpting sy ny modely fanaovana. Raha tonga teo am-atrikasa, izy dia afaka mianatra isan-karazany ilaina hafa fahaiza-manao: simia, mpampatsiro hanina, vy miasa, lalotra fanariana, hoditra miasa, haihetsika sy ny fandrafetana.
Tsy Léonard irery no tanora mpanao hoso-doko ao amin'ny atrikasan'i Verrocchio. Mpanao sary hosodoko maro hafa no nampiofana tao, na tonga nitsidika matetika. Ny sasany tamin'izy ireo tatỳ aoriana malaza: Ghirlandaio, Perugino sy Botticelli. Ireo mpanakanto rehetra dia zokin'i Léonard taona vitsivitsy monja.
Milaza tantara mahaliana amin'ny fiainan' ny Léonard hatramin'izao Vasari. Verrocchio ampitain'i sary lehibe ny batisa an'i Kristy. Nomen'i Verrochio asa fandokoana ny iray tamin'ireo anjely mihazona akanjo lavan'i Jesosy teo amin'ny lafiny ankavia amin'ny sary i Léonard. Nolazain'i Vasari fa vitan'i Léonard hoso-doko ilay anjely, ka nametraka ny borosy avy ka tsy nandoko intsony i Verrocchio. Raha dinihina akaiky ny sary hosodoko dia hita fa maro ny faritra hafa ao amin'ny sary, toy ny vato, ny renirano ary ny fototra mety ho voalokon'i Léonard koa. Nanao sarivongana halimo an'i Davida tamin'izany fotoana izany i Verrocchio. Ary misy mihevitra fa nampiasa an'i Léonard ho modely i Verrocchio.
Tamin'ny 1472 tany ho any .Tamin'izy roa-polo taona, nanatevin-daharana ny fikambanan'ny Masindahy Lioka i Léonard, fikambanana ny mpanakanto sy ny dokotera ny fitsaboana. Na dia taorian'ny fanomezan'ny rainy atrikasa ho azy manokana aza izy, dia mbola tia niasa tao Verrocchio ny atrikasa i Léonard.  ny asa fantatra voalohany Léonard dia sary eo amin'ny penina sy ranomainty ny lohasahan'ny renirano Arno. Manana ny daty 5 Aogositra 1473. Izany dia izao ao amin'ny Uffizi Gallery.
Taona niasana tamin'ny 1476-1499[hanova | hanova ny fango]
Rehefa manoratra momba an'i Léonard i Vasari, dia mampiasa teny toy ny hoe "mendrika", "malala-tanana", "tsara tarehy" sy "tsara tarehy" izy. Vasari dia milaza amintsika fa toy ny olon-dehibe dia lava ranjanana ary tsara tarehy ny olona. Tena mahery izy fa afaka manenjana kitron-tsoavaly tamin'ny tànany. Ny feony dia tsara tarehy fa azon'ody izay rehetra nandre izany. Saika ny olona rehetra te ho namany. Tia biby, dia zava-maniry, ary dia nividy vorona eny an-tsena, ary nandefa azy ho afaka. 
Tena kely no fantatra momba ny fiainan'i ary ny asan'i Léonard de Vinci eo amin'ny 1472 hatramin'ny taona 1481. Izy angamba be zava-katao tao Florence. Tamin'ny 1478, dia nanana asa lehibe hanoratanao ny zavatr'alitara ho ny moanina any San Donato a Scopeto izy. Ny sary hosodoko dia ho ny fitsaohana ny Magy (olon-kendry telo). Tsy vita mihitsy ny sary hosodoko, satria nalefa ho any Milan i Léonard de Vinci .
Léonard dia tena nanan-talenta tamin'ny mozika. Tamin'ny 1482, dia nanao lokanga volafotsy (zavamaneno) manana endriky ny soavaly ny lohany. Tamin'izany fotoana izany dia tonga tam-pitondrana ny mpitondra vaovao tao an-tanànan'i Milan, any avaratr'i Italia. Duke Ludovico Il Moro i fanaovana natahotra ny mpitondra hafa. Lorenzo Medici dia naniraka Léonard ho ao Milan ho iraka. tia an'i Lorenzo de 'Medici homen'i Léonard an'i Ludovico ny lokanga ho toy ny fanomezana avy aminy. Léonard dia nanoratra taratasy ho any amin'ny Duke ny Milan, nilaza taminy ny momba ny zava-drehetra mampahira-tsaina azy sy ny zavatra ilaina azony atao, toy ny milina fanaovana ady. Nosoratany tao amin'ny taratasy fa afaka "manao hoso-doko" ihany koa izy. Tsy nahalala tamin'izany fotoana izany i Léonard fa ny sary hosodoko no tena hahatsiarovana azy. nijanona tany Milan i Léonard, ary niasa ho an'ny Duke teo anelanelan'ny 1482 sy 1499. Anisan'ny ny asany dia ny fandaharana fety sy ny fetibe . Ao amin'ny boky fanamarihan'ny Léonard dia sary ny akanjo n-teatra, fiarovan-doha mahagaga sy ny toe-javatra izay mety ho ampiasaina amin'ny trano filalaovana.
Léonard, toy ny ankamaroan'ny mpanakanto malaza tamin'ny androny, dia nanana mpanompo, tanora mpianatra ary mpanampy lehibe kokoa tao amin'ny atrikasa. Anisan'ny mpianatra tanora, dia nisy natao hoe Giacomo Gian Caprotti da Oreno. Izy dia tovolahy tsara tarehy amin'ny lava tsara tarehy lava volo mihoronogorona manan-dokom-bolamena. Dia nijery izy tonga lafatra toy ny mpanakanto ny modely ho an'ny anjely iray. Fa toy izany izy sarotra sy tsy marina zazalahy fa Léonard niantso azy hoe "Salai" na "Salaino" izay midika hoe "ilay devoly kely". Léonard dia nanoratra tao amin'ny kahie fa indrindra tia vola i Salai, ary mpandainga ka efa nangalatra zavatra avy ao amin'ny trano in-dimy raha kely indrindra. Nitoetra tao amin'ny ankohonan'i Léonard nandritra ny telo-polo taona amin'ny maha-mpianatra sy ny mpanompo azy i Salai .
Gran Cavallo[hanova | hanova ny fango]
Ny asa manan-danja indrindra an'i Léonard ho an'ny Duke Ludovico dia ny hanao be sarivongan'ny ny mpitondra teo aloha, Francesco Sforza, mpitaingin-tsoavaly. Ary nanomboka tamin'ny soavaly izy. Rehefa avy nianatra soavaly sy ny sary teti-dratsiny, dia nanao soavaly tanimanga lehibe. Nantsoina hoe ilay "Gran Cavallo" (Soavaly be). Natao ho amin'ny varahina ilay izy. Izany no sarivongana varahina lehibe indrindra tanatin'ny arivo taona. Indrisy anefa, tsy mihitsy ny soavaly varahina. Tamin'ny 1494, nanome ny varahina mba hanaovana tafondro i Ludovico, satria nanafika an'i Milan ny tafika frantsay.  Ny lehibe soavaly tanimanga lehibe dia mbola mitsangana tamin'ny 1499 rehefa nanafika indray tafika frantsay. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nampiasaina ho kinendry ka potika tanteraka. 
Sakafo hariva farany[hanova | hanova ny fango]
Vao mainka malaza ny sary hoso-dokon'i Léonard lehibe hafa any Milan. Izany dia ny Sakafo Hariva Farany. Ny sary hoso-doko mampiseho ny sakafo farany nozarain'i Jesosy sy ny mpianany, talohan'ny nisamborana azy sy ny fahafatesany. I Léonard dia nisafidy ny nandoko ny fotoana Jesosy hoe "ny anankiray aminareo no hamadika Ahy".
Ary rehefa vita izany, ny olona rehetra izay efa nahita ilay hosodoko dia nilaza fa tena goavana be ilay izy.
Virjinin'ny Vato[hanova | hanova ny fango]
Virjinin'ny Vato, ao amin'ny tranombakok'i Louvre, Paris
Rehefa niasa ho an'ny Dioka Ludovico i Léonard dia asa fandokoana roa no azony. Ny izay dia y mandoko piesin'aliteara ho an'ny Confraternité de l'Immaculée Conception. Indroa nataony ilay asa fandokoana. Navelany tamin'ny moanina tany Milan ny iray, ary ny iray hafa dia nentiny ho any Frantsa ary hita ao amin'ny tranombakok'i Louvre ilay izy ankehitriny. Ireo sary hosodoko ireo dia samy mitondra ny anarana Virjinin'ny Vato. Izy ireo dia maneho ny sarin'i Maria Virjiny ary Jesosy eo amina tendrombohitra misy mistery. Mihaona amin'i Jaona Mpanao Batisa i Maria ary Jesosy. Misy tantara (izay tsy ao amin'ny Baiboly, fa ao amin'ny fomba nentindrazana kristianina) izay mikasika ny fifanenan'i Jaona zaza kely sy Jesosy zaza kely tamin'ny lalana mankany Ejipta. Eo amin'ny asehon'ny hosodoko dia mivavaka i Jaona ary Manangana ny tanany mba hanamasina an'i Jaona i Jesosy. Tsy nisy sary hosodoko natao ohatra io taloha.
Taona niasana 1499-1513[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 1499, voaongana i Ludovico Il Moro. Niala tao Milan amin'ny mpanompony Salai sy namana i Léonard, Luca Pacioli, izay mpahay matematika. Dia nandeha ho any Venise izy ireo. Niasa ho mpanao maritrano amin'ny miaramila ary ny injeniera i Léonard. Satria Venise dia tanàna mipetraka amin'ny nosy maro, niezaka nieritreritra momba ny fomba niarovana ny tanàna amin'ny fanafihan-tafika an-dranomasina i Léonard.
Tamin'ny 1500, dia niverina ho any Florencei Léonard ary mandray ny "ankohonany" ahitana ny mpanompo sy ny mpianatra niaraka taminy. Ny moanina avy amin'ny monasiteran'ny Filazana Masina dia nanome an'i Léonard trano sy atrikasa lehibe. Tamin'ny taona 2005, ny trano sasany izay ampiasain'ny Sampan-draharahan'ny ny Jeografia ara-miaramila dia ho naverina amin'ny laoniny. Ireo mpamerin'endrika dia nahita fa studio an'i Léonard ny ampahan'ilay trano.
Virjiny sy ny Ankizy miaraka amin'i Masimbavy Anne ary Masindahy Jaona Mpanao Batisa[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka asa tamin'ny hoso-doko vaovao i Léonard . Nanao "sariitatra" lehibe izy. (Midika izany ny sary fa dia drafitra ho an'ny sary hosodoko.) Nampiseho ny sariitatra Maria Virjiny mipetraka eo amin'ny lohaliky ny reniny, Masimbavy Anne. mihazona ny Jesosy zaza teny an-tanany i Maria. Jesosy haninjitra ny tànany tamin'ny tanora havany Jaona Mpanao-batisa. Vasari dia milaza fa ny olona rehetra dia tena talanjona noho ny sary tsara tarehy ka "na lehilahy sy vehivavy, na tanora na antitra" dia tonga amin'ny vondrona lehibe mba hahita izany "sahala ny hoe nanatrika fety lehibe izy ireo". Ny sary dia izao ao amin'ny National Gallery, any Londres. Na dia efa antitra izy, ka efa matromatroka, ary tanana any amin'ny efitra maizina, ny olona mandeha any amin'ny lalan-tsarany mba hipetraka eo anoloany isan'andro. Toy ny ny tetikasa maro an'i Léonard, tsy nanao ny sary hosodoko.
Adin'i Angiari[hanova | hanova ny fango]
Adin'i Anghiari, Louvre, Paris
tamin'ny 1502 sy 1503, dia niasa ho an'ny Cesare Léonard Borgia, ambony mahery izay, zanak'i Papa Aleksandra VI i Léonard. nandeha manodidina Italia niaraka tamin'ny Borgia i Léonard , toy ny miaramila mpanao maritrano sy ny injeniera. Tamin'ny faramparan'ny taona 1503, niverina tany Florence i Léonard. Ary nanatevin-daharana ny fikambanan'ny Masinahy Lioka.
Izy dia nomena asa iray tena manan-danja. Ny Signoria (Filan-kevitry ny tanàna) tao an-tanànan'i Florence dia tia hanana freska voaloko roa lehibe eo amin'ny rindrin'ny efitrano lehibe indrindra ao amin'ny Lapan'ny Signoria. Michelangelo dia ny handoko ny ady tao Cascina ary Léonard dia handoko ny ady tao Anghiari. Nanomboka ny tetikasa amin'ny alalan'ny fianarana sy ny sary ny tarehin'ny olona tezitra sy niady soavaly i Léonard. Mbola azo jerena ao amin'ny kahieny ireo sary ireo. Indrisy anefa, tsy fahombiazana ho an'ny Léonard iray hafa ilay izy.
Rehefa nanao ny sary hoso-doko teo amin'ny rindrina izy, tsy nampiasa loko ho ana freska fa loko diloilo. Tsy maina ilay loko. Nandrehitra afo i Léonard mba hanamaina azy fa nitsonika indray ilay loko. I Peter Paul Rubens no nandoko ny ampahany afovoany. Rehefa misy ny fotoana, nanarona azy ny filan-kevitry ny tanàna ka naka olon-kafa no nalainy. Tsy vitan'i Michelangelo ny anjara hoso-dokony, satria niantso azy ho any Roma ny Papa.
Mona Lisa[hanova | hanova ny fango]
Mona Lisa, La Gioconda na koa La Joconde (1503–1519)—Louvre, Paris, France
Tamin'ny taona 1503 tany ho any dia nanomboka nandoko an'i mona Lisa i Léonard, hosodoko izay anisan'ny nalaza indrindra tamin'izay nataony. Niasa toa izany izy nandritry ny taona maro. Izy io dia sary kely nolokoina tamin'ny menaka teo ambony hazo. Izy io dia maneho ny tarehy, ny faritra ambonin'ny vatana ary ny tanan'ny vehivavy. Tsotra be mihitsy ny fiakanjoany. Rehefa anaovana sary hosodoko anefa dia hanao ny akanjony sy ny vakony tsara indrindra ny vehivavy. Manao akanjo maizina ary fitafiana mainty eo ambonin'ny lohany i Mona Lisa. Namela eva matetika ahafantarana ny olona ataony hosodoko i Léonard. Ny zavatra tsy mahazatra mikasika amin'ity sary ity dia ny tsiky. Ny tsiky dia ny endrika anoroana ny anarany: Mona Lisa Giacondo. Giacondo dia midika hoe "mpanao vazivazy". (Mona dia fohy ho an'ny Madonna izay midika hoe "Andriamatoa".)
Ny antony mahatonga ny sary hosodoko no tena malaza dia ny hoe toa mba ho feno ny zava-miafina. Mijery ny mpijery ny masony na aiza na aiza no misy azy. Kanefa tsy misy olona afaka maminavina-zavatra izay mieritreritra. Toa mitsiky ny masony sy ny vavany. Tsy zavatra mahazatra amin'ny sary portrait anefa izany. Rehefa ny olona iray te hamaky ny fihetseham-pon'ny olona iray, dia mijery ny zorony amin'ny vavany sy ny masony. Fa nandoko aloka malefaka eo an-joron ny Mona Lisa am-bavan'i sy ny masony i Léonard, mba hanakona ny fanehoam-pihetsem-po. Ny aoka malefaka ihany koa dia hita teo amin'ny lafiny roan'ny tarehiny, ny tendany sy ny tanany. Ny fomba fampiasan'i Léonard aloka dia antsoina hoe "sfumato" (izay teny Italiana midika hoe "setroka"). Nilaza i Vasari fa tsy hisy mpanakanto hahavita mandoko tahaka io.
Taona niasana 1506-1516[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 1506, dia niverina tany Milan i Léonard sy ny mpianany, ka nitoetra tao an-tranony tao Porta Orientale. Ny sasany tamin'ireo mpianatra dia lasa mpanao sary hosodoko: Bernardino Luini, Giovanni Boltraffio sy Marco Antonio D'Oggione. Nanao dika mitovy maromaro ny fiaraha-misakafo farany i D'Oggione. I Luini dia nanao dika mitovy ny Virjiny ny harambato. I Boltraffio (sy ny hafa) dia nanao hosodokon'ny Madonna sy ny Ankizy zay mety mbola ho hita amin'ny fampirantiana zavakanto sy ny fiangonana. Ny iray amin'ireo mpianatra dia andriana tanora nantsoina hoe Andriana tandapa Francesco Melzi. Tsy lasa mpanao hoso-doko tena tsara i Melzi, fa tia an'i Léonard, ka nitoetra teo aminy mandra-pahatongan'ny nahafatesan'i Léonard.
Tamin'ny Septambra 1513, nankany Roma i Léonard ka nitoetra tany mandraky ny taona 1516. ary nonina tany amin'i Vatikana. Ireo mpanao sary hosodoko Telo lehibe indrindra tamin'ny Renaissance Avo, Léonard, Michel-Ange ary Raphael dia niasa tany Roma avokoa tamin'izany andro izany. Na dia miara-tononina sahala mpinamana aza ny anaran'izy ireo dia tsy mpinamana izy ireo. Enimpolo taona mahery i Leonard tamin'izany fotoana izany. Zokinjokiny i Michel-Ange. Tsy mpinamana tamin'i Léonard na Raphael izy. Tanora mpanao hoso-doko tena fetsy i Raphael, izay nianatra zavatra maro tamin'ny alalan'ny fijerena ireo sary voalokon'i Léonard sy Michel-Ange. Fa tsy nisy nampianatra azy ireo roa ireo.
Tamin'ny volana Oktobra 1515, dia tafiditra tao Milan ny Mpanjaka François I an'i Frantsa. Tamin'ny 19 Desambra, dia nisy ny fivorian'ny François I sy Papa Léon X, tao Bologna. Nankany amin'ny fihaonana tamin'ny Papa Léon i Léonard. I Léonard dia nanao kilalao mahagaga ny mba hampiala voly ny Mpanjaka François. Izany kilalao izany dia milina sahala liona mitovy habe amin'ny tena izy ary mety mandeha. Nisy varavarana teo amin'ny vatany ary misy voninko lys mivoaka rehefa sokafana. Evam-panjakan'ny mpanjaka Frantsay ny lys
Fahanterana ary fahafatesana (1516-1519)[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny 1516, nanasa an'i Léonard ho any Frantsa niaraka taminy i François I. Nomeny Léonard trano tsara tarehy antsoina hoe Clos Luce (indraindray dia antsoina hoe "Cloux"). Akaikin'i Lapan'i Amboise lapan'ny mpanjaka no misy azy, Tao amin'ny Clos Luce no niainan'i Léonard nandritra ny telo taona farany, miaraka amin'ny namana mahatoky sy niofana, Melzi. Ary ny mpanjaka dia nanome ny vola fisotroan-dronono 10.000 scudi. Iray amin'ireo sary hoso-doko farany izay nataon'i Léonard dia ny sarin'i Jaona Mpanao Batisa. Ny modely dia Salai, niaraka tamin'ny volony lokom-bolamena tsara tarehy.
Rehefa mby ho faty i Léonard, dia nangataka mpisorona ho avy, mba hahafahany manao ny fiaiken-keloka sy handray Kominio Masina. Maty tao amin'ny Clos Luce i Léonard, tamin'ny 2 Mey 1519. Efa lasa namana akaiky i François I. Milaza i Vasari fa ny mpanjaka nanondro ny lohan'i Léonard ny tanany rehefa maty. Araka ny sitrapony, dia nanontany mpangataka enim-polo hanaraka ny vatam-paty eo amin'ny filaharana. Ary nalevina tao amin'ny trano fiangonana ny amin'ny Château d'Amboise.
Léonard dia tsy nanambady ary tsy nanan-janaka. Tamin'ny sitrapony, dia nandao ny vola, ny boky sy ny sary hoso-doko ho an'i Melzi. Nahatsiaro ny hafa ihany koa i Léonard : ny mpianatra sy ny mpanompony Salai Battista von Vilussis, izay samy nahazo ny antsasaky ny tanim-boalobok'i Léonard akaikin'i Milan. Ny ankavia Léonard ny hanompo vehivavy mainty lamba amin'ny sisin'ny volom-biby. Salai no tompon'ny sary hoso-doko malaza indrindra an'i Léonard, ny Mona Lisa. Mbola nanana izany izy, taona vitsivitsy taoriana, rehefa maty izy, taorian'ny adin'olon-droa.
Ny Mpanjakab'i Frantsa François dia nilaza hoe: "Tsy mbola nisy olon-kafa teraka teto amin'izao tontolo izao izay nahalala zava-betsaka toa i Léonard, na momba ny hoso-doko, sary sokitra na trano, filôzôfa be ihany koa izy"
Sary, bokin-tsary[hanova | hanova ny fango]
Tsy mpanao hoso-doko mazoto i Léonard, fa izy dia tena mazoto manao sarisary na drafitra, ary nitaznona firaketana feno sary kely sy ny tsipiriany isan-karazany ny zavatra izay nitondra ny sainy. Toa ny firaketana sary nananany, dia nisy ireo fanadihadiana ho ana sary hosodoko, ary ny sasan'izy ireo dia fantatra fa fanomanana amin'ny asa toa ny Fanompoana ny Mazy, Virjinin'ny Vato ary ny Sakafo hariva farany. Ny sary nataony voalohany dia ny Endritoeran'ny Lohasahan'i Arno, 1483 izay maneho ny renirano, ny tendrombohitra, ny lapa Montelupo ary ny tanim-boly manodidina amin'ny antsipirihany.
Anisan'ny sary malaza natony ny Olon'i Vitruvia, izay manadihady ny arakevitry ny vatan'olombelona, ny Lohan'Anjely, ho an'ny Virjinin'ny Vato ao amin'i Louvre, fanadihadiana bôtanika mikasika ny Kintan'i Betlehema, ary sary lehibe (160×100 cm) natao tamin 'ny tsaoka mainty tambony taratasy voalokon'ny Virjiny sy ny Zaza miaraka amin'i Masimbavy Anne ary Masindahy Jaona Mpanaobatisa ao amin'ny National Gallery, Londres. Izany zary iszany dia mampiasa ny teknika sfumato tahaka izay hita amin'ny sary hosodoko Mona Lisa.
Sary hafa mahaliana dia ahitana fianarana maro antsoina hoe "kisarisary", satria, na tafahoatra aza, toa ho mifototra amin'ny fanamarinana ny modely velona ilay izy. Nitantara i Vasari fa raha nahita mahaliana olona amin'ny tarehiny i Léonard dia hanaraka azy manodidina mijery azy ireo mandritra ny andro izy. Maro ireo fanadihadiana mikasika ny tovolahy tsara tarehy, matetika miaraka amin'ny Salai, sy ny tsy fahita firy, ary endri-tarehy deraina be, ilay antsoina hoe "endrika grika". Ireo tarehy ireo matetika dia ampifanoherana amin'ny an'ny mpiady.
Salai dia matetika aseho amin'ny akanjo raitra. Fantatra fa nanao haingohaingo ho ana fampieshoana mety miaka amin'ireo akanjo ireo i Léonard. Ny hafa, izay matetika sary natao tsara dia maneho fanadihadiana mikasika ny fanaovana drapery. nitranga tao amin'ny asa tany am-boalohany ny marika fampandrosoana ao amin'ny Léonard ny fahaizany manao drapery.
Ny sary hafa matetika alain-tahaka dia Sketch natao Léonard tany Florence tamin'ny 1479 mampiseho ny tenan'i Bernardo Baroncelli, nahantona, izay mifandray amin'ny famonoana an'i Giuliano, rahalahin'i Lorenzo de 'Medici, ao amin'ny Fikomian'i Pazzi. Naraikitr'i Léonard an-tsoratra amin'ny fomba mahitsy ary tsy iharam-pihetseham-po, ary amin'ny soratra mivadika toa ny soratra jerena amin'ny fitaratra, ny akanjo nitafian'i Baroncelli tamin'izy maty.
Fanadihadiana ny momba an'i Léonard[hanova | hanova ny fango]
Diary ary sora-tanana[hanova | hanova ny fango]
Ny homanisman'ny Renaissance dia tsy mahalala fifanatendroan'ny siansa ary ny zavakanto, ary tena manaitra ny asan'injeniera ary ny asam-panakanton'i Léonard. Ireo asa ireo dia voaraikitra anaty pejy miisa 13.000 izay ahitana asa soratra ary asa tanana, izay mampifangaro ny zavakanto ary ny filozofia voanjanahary (izay mpiandoha ny siansa maoderina), izay noraiketiny ary nokojakojainy isan'andro nandritry ny fiainany ary ny dia nalehany, rehefa nandinika ny tontolo nanodidina azy izy.
Sahala sary navadika tamin'ny fitaratra ny asa soratr'i Léonard. Ny fanazavana hita amin'izany dia mety nanoratra tamin'ny tanany ankaviany izy. Mora kokoa amin'izany fotoana izany ny manoratra mivadika (rehefa manoratra amin'ny tanana ankavia), satria tsy nanoratra tsara ny penina rehefa notsindriana.
Ny soratanana ary ny sary navelany dia maneho ny valan'ny zavatra mahaliana azy ary ny raharaha ilainy atao, anisan'ny asa sorany dia ireo lisitry ny entanan tokony ananana ary ny vola ananany amin'olona. Ary koa sarin'elatra ary kiraro entina mandeha ambonin-drano. Misy ihany koa ireo famoronana ho ana sary hosodoko, ireo fanadihadiana drapery amin'ny antsipirihany, fanadihadiana mikasika ny tarehy ary ny fihetseham-po, biby, zazakely, fandihadiana ny zavamaniry, fipoiran'ny vato, ranomody, milina fiadiana ary koa maritrano.
Fanadihadiana siantifika[hanova | hanova ny fango]
Rômbikobôktahedirôna, hita ao amin'ny De Divina Proportione
Ny fomba fanakaikezan'i Léonard ny siansa dia miankina amin'ny fandinihana: nanandrana ny nahazo sary an-tsaina ny zava-mitranga izy amin'ny alalan'ny famaritana ary ny fandraiketana ny zavatra mitranga amin'ny antsipirihany rehetra azony natao. Tsy nananafy ny fanazavana teôrika na ny traikefa izy. Noho izy sy ampy fanabeazana amin'ny teny latina sy ny matematika, dia tsy noraharahian'ireo manampahaizana tamin'izany fotoana izany ny asa natao, na dia efa nampianatra fiteny latina ny tenany aza izy. Tamin'ny taona 1490 tany ho any dia nanatra matematika niaraka tamin'i Luca Pacioli izy ary nannomana andian-tsarin'ny endrika sarim-benty amin'ny endrika ho voasokitra toa ny takelaka ho an'ny bokin'i Pacioli De Divina Proportione, izay navoaka tamin'ny taona 1509.
Hita avy amin'ny voatin'ny diariny ny fanomanana andiam-panadihadiana ho avoaka mikasika ny taranja maro. Ny fanadihadiana iray misy heviny mikasika ny rafi-batana dia voalaza ho hita nandritry ny fitsidihan'ny sekreteran'i Louis D'Aragon tamin'ny 1517. Navorin'ny mpianany Francesco Melzi ny lafin'ny asany miaksika ny fanadihadiana ny rafi-batana, ary navoaka ho Fanadihadiana amin'ny Hosodoko nataon'i Léonard de Vinci tany Frantsa ary tany Italia tamin'ny taona 1651, ary tany Alemaina tamin'ny 1724. Izany dia m iaraka amin'ny soratra voasokitra miankina amin'ny sarin'ny mpanao hosodoko klasika Nicolas Poussin. Arak'i Arasse, ny fanadihadiana, izay lasa anaty fanontana 62 tao Frantsa (nandritry ny 50 taona), dia nahatonga an'i Léonard ho hita ho mpialoha lalana ny hevitra akademika amin'ny zavakanto.
Rehefa nanaraka fomba siantifika mazava ny fanaovan'i Léonard traikefa, dia nampiseho azy ho karazana siantifika samihafa amin'i Galileo, Newton na siantifika hafa taoriany ny fanadihadian'i Frtijof Capra natao vao haingana ary feno natao. Izany fanadihadiana izany koa dia milaza fa namin'ny maha-olona amin'ny Renaissance azy,, dia mampiitra ny zava-kanto ary indrindra ny sary hosodoko ny fahafahany manao teôria ary fametrahan-keviny.
Rafi-batana[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka tamin'ny fiofanany tamin'i Verrocchio ny fianaran'i Léonard ny hairafibatana. Nikiry ny mpianany hianatra ny hairafibatana i Verrocchio. Amin'ny maha-mpanakanto azy, dia lasa tompom-pahaizana amin'ny hairafibatana tôpôgrafika i Léonard, amin'ny alalan'ny fanadihadiany be dia be mikasika ny hozatra ary tondro ara-batana hita maso. nametraka ny fototry ny hairafibatana siantifika izy, ary mandidy an-kiafenina ireo vatan'ny mpaneloka, mba hiala amin'ny Fitsaram-piangonana (Inquisition). Sarotra be ny tontolo iasana tamin'zany fotoana izany noho ireo olam-pahadiovana ary ny fihasimban'ny vatana.
Amin'ny mpaha-mpanakanto malaza azy, dia nahazo alalana ny mandidy fatin'olona ao amin'ny hôpitaly Santa Maria Nuova tao Florence izy, ary taoriana, tao amin'ny hôpitalin'i Milan ary Roma. (nanao aotôpsia maro izy tao amin'ny hôpitaly romanina Santo Spirito in Sassia tamin'ny taona 1513 hatramin'ny 1516). Nandidy faty mahery ny roapolo izy nanomboka tamin'ny 1487 mba hanoratana fanadihadiana mikasika ny rafibatana izay tsy hivoaka mihitsy. Nanomboka tamin'ny 1510 hatramin'ny 1511 dia niara-niasa taminy ny dokotera Marcantonio della Torre.
Maro ireo taolana ary hozatra izay nataon'i Léonard sary. Nataony sary ihany koa ny fo ary ny rafi-dalan-dra, ny maso, ny taovam-pananahana ary taova anaty maro hafa. Ahitana hadisoana noho ny tsifahaizana tamin'izany fotoana izany ny dinika nataony. Na dia izany aza, dia nahita efi-po efatra izy (roa ihany no hitan'i Descartes ary Vésale). Izy ihany koa no anisan'ny nanao sarin-jaza am-bohoka voalohany indrindra. Amin'ny mpaha-mpanakanto azy dia nandinika ny fiantraikan'ny taona amin'ny fiziôlôjia ary amin'ny fihetseham-pon'ny olombelona i Léonard.
Maro ihany koa ireo biby efa nodidiany: ombivary, vorona, jako, sahona ary orsa.
Ao amin'i Freebase:  Archived Mey 1, 2016 at the Wayback Machine
↑ According to Alessandro Vezzosi, Head of the Leonardo Museum in Vinci, Piero may have owned a Middle Eastern slave called Caterina. A study of Leonardo's fingerprint suggests that he may have had Middle Eatern blood.Experts Reconstruct Leonardo Fingerprint" December 12, 2001
↑ 5,0 5,1 et 5,2 Bortolon, Liana (1967), The Life and Times of Leonardo, London: Paul Hamlyn
↑ Martindale, Andrew, The Rise of the Artist, Thames and Hudson, ISBN 0-5000-56006-4
↑ Arasse, Daniel (1997), Leonardo da Vinci, Konecky & Konecky, ISBN 1 56852 1987
↑ Eugene Muntz, Leonardo da Vinci Artist, Thinker, and Man of Science (1898), quoted at Leonardo da Vinci's Ethical Vegetarianism
↑ Arasse, Daniel (1997), Léonard da Vinci, Konecky & Konecky, ISBN 1 56852 1987
↑ Owen, Richard (2005-01-12). "Found: the studio where Leonardo met Mona Lisa". The Times. Retrieved 2008-02-22.
↑ Jack Wasserman, Leonardo da Vinci
↑ Georges Goyau, François I, Transcribed by Gerald Rossi. The Catholic Encyclopedia, Volume VI. Published 1909. New York: Robert Appleton Company. Retrieved on 2007-10-04
↑ Miranda, Salvador (1998-2007), The Cardinals of the Holy Roman Church: Antoine du Prat, retrieved 2007-10-04
↑ 18,0 et 18,1 Popham, A.E. (1946). The Drawings of Leonardo da Vinci.
↑ Arasse, Daniel (1998). Leonardo da Vinci.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Léonard_de_Vinci&oldid=1022495"
Teraka tamin'ny taona 1452
Maty tamin'ny taona 1519
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 06:45 ity pejy ity.